Soo dejisan ZenMate 5.0.0.50 – Vessoft
WindowsShabakadVPN iyo WakiilZenMate
Bogga rasmiga ah: ZenMate
ZenMate – waa software si aad u ilaaliso asturnaantaada iyo amnigaaga internetka. Software waxay bixisaa xayeysiin internet ah oo aan qarsoodi aheyn oo soo marin xayiraad goboleed. ZenMate waxay ku siineysaa inaad ku xirto mid ka mid ah tiro ka mid ah server-yada caalamiga ah ee la heli karo si loo qariyo cinwaankaaga IP-ga oo waxaad siisaa shabakad kasta. Barnaamijkani wuxuu ka hortagi karaa bixiyeyaasha adeegga internetka iyo hay’adaha takhasuska ah ee ka soo horjeeda waxqabadka internetka ee internetka. ZenMate waa wax aad u weyn si aad u ilaaliso xogtaada ka timid kuwa soo weeraray shabakadaha dadweynaha. ZenMate sidoo kale waxaa ku jira qayb gaar ah oo qalab ah si shakhsi ahaan loo sameeyo hawlgalka software.
Barta Internetka ee qarsoodiga ah
Cinwaanka IP-ku dhuumashada
Helitaanka websaydhyada la xiray
Qaar ka mid ah macaamiisha caalamiga ah
Soo dejisan ZenMate
Faallo ku saabsan ZenMate
ZenMate Xirfadaha la xiriira